Batrị nke MacBook Pro ọ na-emezu nnwere onwe e kwere ná nkwa? | Esi m mac
Batrị nke MacBook Pro ọ na-emezu nnwere onwe e kwere ná nkwa?
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacBook Pro, Nkuzi, ọtụtụ
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya anyị na-anata MacBook Pro anyị na-atụ anya ogologo oge na ihe a na-ahụkarị bụ itinye ha ule na akụkụ ndị ahụ anyị na-achọkarị n'aka ndị otu anyị, na ebumnuche iji nyochaa arụmọrụ ha. Anyị na-ahụ ihe ndị a na-ekwu na ọgbakọ gbasara ike, ntụgharị ma ọ bụ njikwa nke Ogwe Touch ọhụrụ.
Na awa ndị ikpeazụ anyị nụrụ ozi dị iche iche dị iche iche uche, na ikwu na batrị obodo kwụụrụ nke akụrụngwa ọhụrụ. E nwedịrị ndị tinyela onye nrụpụta ahụ nnwale, na-elele ndụ batrị ya na njiri ndị onye nrụpụta ahụ tụrụ. Ka anyị lee ihe nyocha ahụ bụ.
Apple kwere nkwa ruo elekere 10 nke nnwere onwe n'ọnọdụ ndị a:
Na-eme nchọgharị site na netwọk ikuku.
Na-egwu ihe nkiri iTunes.
Apple na-akọ ule na ngwa ndị a:
MacBook Pro 13-inch dual-core Intel Core i5, 2,9GHz, sistemụ nwere 512GB SSD na 8GB RAM.
Ngwa ule onye ọrụ bụ:
MacBook Pro si 13-anụ ọhịa, abụọ-isi Intel Core i7a 3,3 GHz, na 512GB SSD na 16GB RAM.
Ebe ọ bụ na akụrụngwa a dị elu karịa, a ga-atụ anya nsonaazụ dị ala na nnwere onwe.
Esoro usoro ndị a n'okpuru, iji lelee ndụ batrị na ihe nkiri iTunes nkiri. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ule ahụ n'onwe gị, ihe ndị a bụ usoro:
Kwụpụ 1: Jikọọ MacBook na chaja ya ma kwụọ ụgwọ ya ruo mgbe ebubo zuru oke (100%).
Kwụpụ 2: Download ihe nkiri 1080p site na iTunes.
Kwụpụ 3: Mepụta ndepụta ọkpụkpọ ọhụrụ, ma gbakwunye fim abụọ ebudatara na listi ọkpụkpọ.
Kwụpụ 4: Right pịa ọ bụla nkiri na-eme ka n'aka na video àgwà ga-elu definition (1080p).
Kwụpụ 5: Download Maazị Stopwatch ($ 1,99) site na Mac App Store.
Kwụpụ 6: Mechie ngwa niile ma bidogharịa Mac gị, mana abanyela ruo usoro ọzọ.
Kwụpụ 7: Tinye paswọọdụ gị ma pịa Mgbanwe igodo mgbe ịpị nbanye bọtịnụ. Nke a ga - egbochi ihe nbanye ịbanye site na ịmalite, iji zere iwe batrị karịa mkpa.
Kwụpụ 8: Mepee Mmasị → Na-egosiputa, ma gbanyụọ na-akpaghị aka ịgbanwe nchapụta.
Kwụpụ 9: Na Ogwe aka, dozie nchacha ihuenyo ruo na nke kachasị, wee mezie ngosipụta ihuenyo 12 pịa ruo mgbe i ruru 75% nchapụta.
Kwụpụ 10: Na Touch Bar, megharia keyboard nchapu nke kacha.
Kwụpụ 11: Na Ogwe aka, dozie olu ruo na nke kachasị, wee mezie olu 8 pịa ruo mgbe ị ruru 50 pasent site na olu.
Kwụpụ 12: Jide Nhọrọ (⌥) na keyboard wee pịa akara ngosi ngosi ngosi na menu nhọrọ iji gbanyụọ ọkwa.
Kwụpụ 13: Ẹkedori na Mazị elekere nkwụsị, na ị ga-ahụ ngụ oge na nchịkọta nhọrọ. Zoo ngwa niile ahụ site na ịpị Mr. Stopwatch na mmanya menu ide Zoo Mr. Stopwatch, ma ọ bụ iji Command (⌘) + H. [ Cheta na : Otu ule a nwalere na-enweghị Stopwatch ma enweghị mmetụta pụtara ìhè na ndụ batrị]
Kwụpụ 14: Mepee iTunes ma họrọ ndepụta ọkpụkpọ nke emere na nzọụkwụ 3. Pịa njikwa na mmanya menu ma họrọ Tinyegharịa → Niile. Ihe nkiri mbụ ga-amalite igwu egwu. Ekwesịrị ịhapụ komputa ahụ ruo mgbe batrị MacBook Pro ga-agwụ.
Kwụpụ 15: Kwado ọnọdụ ihuenyo zuru oke maka iTunes nkiri nkiri.
Kwụpụ 16: Dị njikere na ejiri MacBook Pro mee ihe n'ụzọ zuru ezu, ọ bụrụ na ọ bụ, kwụpụ ụdọ ike.
Kwụpụ 17: Ngwa ngwa malite Mr. Stopwatch site na nchịkọta nhọrọ site na iji nhọrọ Start / Stop.
Ihe nsonaazụ nke onye ọrụ bụ ihe dị ka awa 8 nke nnwere onwe. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ batrị na-emetụta ike batrị, nke kachasị mkpa bụ okpomọkụ ụlọ, dị ka ọ na ọnọdụ ọnọdụ nnwere onwe ozugbo ma nwee ike ime ka ndị na-akwado ya rụọ ọrụ, nke n'aka nke ya na-eripịa batrị ọzọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, eNwepu ikike karie ihe ekwenti, nke anyị na-arịọ ka egosipụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ịnwale ule ahụ gwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Batrị nke MacBook Pro ọ na-emezu nnwere onwe e kwere ná nkwa?
Jorge Arturo dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka edemede na ule a.
Achọrọ m ịgwa gị na m nwere Mac Book Pro Touch Bar 2019 na batrị ọhụrụ, 100/100 a. Nwere 2 loading colic. Ihe ndị a mere m: na oku vidiyo, batrị naanị were 2 awa.
Emere m ule ọzọ: kpọọ usoro Apple TV +, mepee Safari, rụọ ọrụ na Peeji, mepụta PDF site na Peeji, mepee WS…. na 90% batrị ahụ kpochara na 1: 45 awa. Nnwere onwe a karịrị ihe rụrụ arụ.
You nwere ike ịma ihe nwere ike ime?
Ana m ekele gị nke ukwuu maka azịza gị.
Zaghachi Jorge Arturo
Jorge Arturo Echeverri dijo
Daalụ Javier ọzọ maka isiokwu ahụ!
Ekwenyere m na ihe akaebe ị na-eweta dị anya site n'iji onye nkịtị regular. Inwe ime ihe niile iji lelee nnwere onwe bụ, ma ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ m, eleghi anya ebe ọ bụ na ọ bụghị akụkụ nke ọrụ m.
Lee, enwere m nsogbu na ndụ batrị nke MacBook Pro 2019 Touch Bar n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị?
Ọnọdụ ọrụ m ga - abụ ihe ndị a:
/ Jiri nke nwa afọ Mail App.
/ Safari mepee ihe dị ka taabụ iri dị iche iche… ọ bụghị ọrụ niile.
/ Jiri Apple Office Suite nke ọ bụla.
/ Na otu n’ime taabụ ndị Safari otu n’ime nhọrọ ndị a: Ọ bụla agbachitere Njikọ ma ọ bụ egwuregwu La Liga (Spain, Italy, England ma ọ bụ Germany) na ESPN: o Vidio ma ọ bụ Egwu na YouTube: Apple TV + na usoro X… Ana m ege ya ntị.
Na batrị na-ewe naanị awa 2… kachasị 3. Ọ dị ịtụnanya!
Ana m agwa gị ụfọdụ ihe:
/ E zụtara MacBook ahụ na Jenụwarị 10, 2020. Site na November 16, ọ nwere 105 ebubo cycles.
/ Na Disemba 16 M jiri kọmpụta ahụ na ebe dị iche karịa ka ọ dị na mbụ bụ nke mere m jiri jiri ya na-erite uru nke batrị na, chaị, kedụ ihe ijuanya, ọ nọrọ naanị 2 elekere. Nke a ka m na-atụ uche nke ukwuu.
/ Agara m ya n'ụlọ ahịa (na Colombia amụma Apple B NOTGH to ịgbanwe igwe mana ka rụzie ya…. Enweghị ụlọ ahịa Apple mana nkwekọrịta: Mac Center, iShop) ma ebe ahụ ha chọpụtara na ọ dị na 90% na mmadụ ole na ole. okirikiri… ha gbanwere.
/ Ha weghachiri m ya na Jenụwarị 9-10, ya bụ, ụbọchị ole na ole gara aga, emeela m ule ọhụụ n'ọnọdụ ọrụ dị iche iche, gụnyere ule na-ele AppleTV + was ọ bụ otu ihe: naanị elekere 2-3 . nnwere onwe.
/ M laghachitere n'ụlọ ahịa na Mọnde, Jenụwarị 18, na ha Downgrade Catalina si BigSur, ha weghachiri m ya. Ihe kpatara ya: BIgSur nwere ike ịnwe nsogbu ma daa ike na obodo nke MacBook ... nke m na-ekwenyeghi ọtụtụ n'ihi na agụghị m ihe ọ bụla gbasara ya.
/ M na-eme ule ọhụrụ, na Catalina arụnyere na…. Nhata: 2-3 aka elekere. Ha na-agwa m na usoro ndị a nwere ike rụọ:
1. Dochie batrị ọzọ na-anwale.
2. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, gbanwee usoro mgbagha ... ma nwalee.
3. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, gbanwee mgbagha osisi ọzọ… ma na-anwale.
4. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, kwaga Apple.
Jọgburu. Ọbụghị naanị usoro mana ihe na-eme m.
Emechara m na ajụjụ ahụ dị n'elu: ị maara, ị maara banyere ịdị adị nke ezigbo, ule a pụrụ ịdabere na ya nke nnwere onwe nke MacBook Pro 2019 Touch Bar n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị?
You nwere ihe nwere ike ịme?
Zaghachi Jorge Arturo Echeverri
Ihe oyiyi mbụ nke ime nke ọhụrụ Apple Campus 2
Egwuregwu kachasị mma nke 2016 maka Mac